Aiditra Am-ponja Tsikelikely Ireo Mpanohitra Malaza Ao Bahrain · Global Voices teny Malagasy
Aiditra Am-ponja Tsikelikely Ireo Mpanohitra Malaza Ao Bahrain
Voadika ny 02 Septambra 2015 17:47 GMT
Bilad Al Qadeem, Bahrain. 30 Desambra 2014 — Mpanao diabe tao Bilad Al Qadeem nitaky ny famotsorana an'i Sheikh Ali Salman, Sekretera-Jeneralin'ny antoko politika Al-Wefaq ao Bahrain, sady mpanohitra lehibe indrindra ny fitondrana ankehitriny. Sary avy amin'ny bahrain14feb bilad. Copyright: Demotix
Nakaton'ny governemanta Bahrainita ny Fikambanana Islamika Al Wefaq, vondrona politika lehibe indrindra ao amin'ny firenena, izay any am-ponja avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ambony ao aminy. I Shaikh Isa Hasan no farany nosamborina, izay nalaina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena ao Bahrain rehefa nody avy nitsidika an'i Iran tamin'ny 18 Aogositra, ary voampanga ho manohana ara-bola ny “fampihorohoroana.”
Niandry dimy andro ny Ministeran'ny Atitany Bahrainita vao nanambara ny fisamborana. Tsy misy ny vaovao navoaka ho an'ny daholobe, na dia teo aza ny tabataban'ny vahoaka sy ny fihetsiketsehana isan'andro mitaky ny famotsorana azy. Tamin'ny andro fahenina, nanambara ny Ministeran'ny Atitany fa i Isa, mpikambana teo aloha tao amin'ny parlemanta dia nogadraina noho ny “famatsiana ara-bola ny asa fampihorohoroana” – fiampangana mavesatra izay hampigadra ilay olo-malazan'ny mpanohitra malaza mandritra ny taona maro.
Arrest of Former MP and Member of Al Wefaq for Financing Terrorism http://t.co/VMWGnR08e7
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 23, 2015
Fisamborana ny Solombavambahoaka teo aloha sady mpikambana ao amin'ny Al Wefaq noho ny Famatsiam-bola ny Fampihorohoroana
Tamin'ny fanambarana navoakan'ny Minisiteran'ny Atitaty, hoy ny voalaza:
He was arrested on the charge of financing terrorism by funding fugitive terrorists and others linked to terrorist acts.
The Director-General said the suspect received donations from various sources, including funds from the participants in rallies, and distributed the same among wanted fugitives. He also gave funds to a terrorist group and one of its members even though he was aware of their terrorist activities and helped cover up their crimes. He also provided shelter to members of the group despite knowing about its terrorist goals.
Nosamborina izy noho ny fiampangana fa namatsy vola fampihorohoroana tamin'ny alalan'ny fanomezana vola ho an'ireo mpampihorohoro nandositra sy ireo hafa tafiditra amin'ny asa fampihorohorona[..]
Nilaza ny Tale Jeneraly fa nahazo fanomezana avy amin'ireo loharano isan-karazany ny ahiahiana, anisan'izany ny vola avy amin'ireo mpandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana, ary nizara izany tamin'ireo gadra nandositra atao hazalambo. Nanome famatsiam-bola hoan'ny vondrona mpampihorohoro iray ihany koa izy ary nihevitra mihitsy aza ny iray tamin'ireo mpikambana fa mahafantatra ny hetsika ataon'ireo mpampihorohoro izy ary nanampy tamin'ny fanakonana ny helok'izy ireo. Nanome fialofana hoan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona ihany koa izy na dia fantany aza ny tanjona fampihorohoroan'izy ireo.
Taorian'ny fanambarana, maro ireo nanohitra ny fiampangana nanenjehana ity mpanao lalàna teo aloha izay nandresy tamin'ny fifidianana 2010 tamin'ny isan-jato 92 tao amin'ny distrikan'i Sitra. Nandefa sary misy ny fihetsiketsehana amin'ny alina tao amin'ny tanàna nahaterahany ny antokony, Al Wefaq.
#Bahrain-is march Sitra streets protesting the arrest of Sheikh Hasan Isa who represented them in 2010 parliament pic.twitter.com/vR7eWMuhYo
— AlwefaqEN (@AlWefaqEN) August 24, 2015
Manao diabe ao an-dalamben'i Sitra i Bahrain mba hanohitra ny fisamborana an'i Sheikh Hasan Isa izay solontenan'izy ireo tamin'ny taona 2010
Vehivavy Bahrainita tsy fantatra anarana manana amin'ny anaram-bosotra Siddiqa nanasongadina ny hazalambo ataon'ny governemanta amin'ireo mpanohitra mavitrika mitaky fitondrana demokratika ao amin'ny fanjakana Helodrano:
كان دائما في مقدمة المطالبين بالحقوق فاتمهته السلطة بالإرهاب #bahrain #الشيخ_حسن_عيسى pic.twitter.com/GubStvDe8K
— Siddiqa (@Siddiqa15) August 25, 2015
Lohalaharana hatrany amin'ireo mitaky zo izy, ka nampangain'ny governemanta tamin'ny asa fampihorohoroana.
Tamin'ny famaliana haingana, olona am-polony no namelaka ny Minisiteran'ny Atitany tamin'ny alalan'ny sary mampiseho ireo olo-malaza mpomba ny governemanta izay nanao fanangonam-bola ankarihary ary nandeha hiady amin'ny vondrona mitam-piadiana ao Syria.
Mpikatroka Bahrainita Hassan Al Sharqi nandefa sary, hoy izy:
هم يجمعون المال والسلاح ويصدرونه للارهاب “علناً” فيعتقل #الشيخ_حسن_عيسى بتهمة تمويل الارهاب! سمّعني، الشيعة أي درجة؟! pic.twitter.com/KJmlBLvxE4
— حسن الشارقي (@Hassan_Alsharqi) August 24, 2015
Manangona vola sy fitaovam-piadiana ary manondrana “ankarihary” izany ho an'ireo (vondrona) mpampihorohoro ka i Sheikh Hasan Isa no nosamborina ary ampangaina ho namatsy vola asa fampihorohoroana! Lazao amiko: saranga inona ny Shiita? “.
Ny tondroin'i Alsharqi amin'ny fanambaran'ny Minisitry ny Atitany fa tsy olom-pirenena saranga faharoa ny Shiita ao Bahrain, izay nolazainy nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ho setrin'ny tsikera marobe amin'ny fanavakavahana ataon'ny fanjakana amin'ny Shiita, izay mandrafitra ny ampahany maro an'isa ao Bahrain.
Mpikambana ao amin'ny parlemanta Bahrainita tamin'ny fotoana nandehan'izy ireo niady tao Syria ny sasany tamin'ireo olona eo ankavian'ny sary. Tafaverina ao Bahrain izy ireo ankehitriny, saingy tsy nandray fepetra ho azy ireo mihitsy ny fanjakana hatramin'ny nahazoan'ireo toerana ofisialy, manararaotra ny tsimatimanota. Mitranga izany na ao anatin'ny fiaraha-mientana amin'i Amerikana manohitra ny ISIS ny governemanta.
حبس”المفترى عليه” #الشيخ_حسن_عيسى لن يجلب لكم استقرار او مكسب وترك من ثبت عليه بالدليل القطعي، يجلب للشعب الإرهاب! pic.twitter.com/GBD4EmnyWV
— #FreeSheikhAli (@BahrainUtd) August 24, 2015
Tsy hitondra filaminana sy tombontsoa ho anao ny fanagadrana an'i Sheikh Hasan Isa, voampanga tsy ara-drariny. Hitondra fampihorohoroana ho an'ny vahoaka ny famelana ireo voaporofo fa meloka avela hiriaria.
Ho an'ireo tsy mitsahatra ny manara-baovao ny toe-draharaha ao Bahrain, tsy sarotra ny mampifandray an'ity famelezana mampidi-doza ny antoko mpanohitra Wefaq ity amin'ny fikasan'ny fitondrana Barhainita hatry ny taloha hampiato ny fikambanana sy manao izay mahameloka ireo mpitarikany.
Tamin'ny volana Jona lasa teo, nosazian’ny fitsarana Bahrainita efa-taona an-tranomaizina ny Sekretera-Jeneralin'ny Al Wefaq i Sheikh Ali Salman. Mbola hodinihan'ny Fitsarana Ambony amin'ny 15 Septambra ny didim-pitsarana. Voampanga ho nitarika fankahalana ampahibemaso, manakorontana ny filaminam-bahoaka, mitarika tsy fankatoavan'ny sivily ny lalàna, fanevatevana andrim-panjakana ary fampiroboroboana ny fanovana fitondrana amin'ny alalan'ny hery miaramila, ankoatra ireo fiampangana hafa. Nosazian'ny fitsarana tamin'ireo fiampangana telo voalohany izy ary afaka madiodio kosa tamin'ny fiampangana farany izay nahatonga ny sazy an-tranomaizina ho any amin'ny lava indrindra hatramin'izay. Nahazo tsikera manerantany ny didim-pitsarana. Nihidy iray volana mahery ihany koa ny lefitra ara-politikan'i Salman, Khalil Almarzooq tamin'ny faran'ny taona 2013 mandra-pamalian'ny Fitsarana ny fanerena iraisampirenena sy nanatsoaka ny fiampangana azy. Voampanga ho nitarika herisetra sy fampihorohoroana ihany koa i Almarzooq . Mbola eo an-dalana kosa ny fitsarana fampiatoana ny Al Wefaq.
Manoloana ny famonjana ireo olo-malaza roa samy solontenam-bahoaka teo aloha, Sheikh Hasan Isa sy Majeed Milad miaraka amin'ny Sekretera Jeneraliny, nanontany an'i Khalil Almarzooq mikasika izay fiantraikan'ny fitsarana ao Bahrain ny Global Voices Online.
“Mety hampitokamonina azy eo amin'ny sehatra anatiny sy iraisampirenana ny famotehana ny Al Wefaq, hahatonga ny governemanta hanana hery handositra ny fanavaozana tena izy,” hoy izy. Na izany aza, toa matoky izy fa tsy izany no hitranga.
“Mamita-tena ny manampahefana Bahrainita amin'ny fiampangana ireo lehiben'ny Al Wefaq amin'ny alalan'ny fanendrikendrehana tsy inoan'ny olona,” hoy izy nanampy.
“Izany dia satria misy ny fatokisana fa nametraka fomba fiasa milamina sy kinendrim-panavaozana hatramin'ny niorenany ny Al Wefaq. Na dia eo aza ireo toe-javatra sarotra nandritra ny efa-taona farany.”
Maro no mino fa te-hanidy ny Al Wefaq amin'ny fifanarahana ara-politika hoavy ny governemanta, mba hanaovana ny fileferana ho any amin'ny kely indrindra.
لماذا الآن استهداف قيادات الوفاق في حين أن المنطقة تتجة نحو حلحلة الملفات العالقة و التي تتطلب حواراً معمقاً؟ #الشيخ_حسن_عيسي #البحرين
— Sameyakhalil (@azameel) August 27, 2015
Nahoana no lasibatra reo lehiben'ny Al Wefaq ankehitriny kanefa mihetsika hamaha ny olana izay mila fifanakalozan-kevitra ny faritra?
Mpanao lalàna hafa avy ao amin'ny vondrona Wefaq ihany koa no noesorina tamin'izy ireo ny zom-pireneny sy / na nosamborina sy nampijaliana hatramin'ny 2011. Nanomboka izany rehetra izany raha nivoaka ny parlemanta hanoherana ny famoretana mahery vaika mihatra amin'ireo fihetsiketsehana ho amin'ny zo ara-politika sy toekarena mieli-patrana manerana ny firenena ny vondrona parlemantera, rehefa nanomboka ilay antsoina hoe Lohataona Arabo.
Tsy ny Al Wefaq ihany no vondrona henjehina satria manohy manao famoretana amin'izay endrika fanoherana rehetra ny governemanta. Mbola any am-ponja ireo mpikambana malaza amin'ny vondrona mpanohitra hafa ary fiampangana mitovy no hanenjehana azy ireo. Miatrika fiampangana ho nikasa hanongam-panjakana, mampiroborobo ny fanavaozana ara-politika amin'ny alalan'ny fampiasan-kery sy mitarika fankahalana tamin'ny kabary nataony tamin'ny volana lasa ho fanomezam-boninahitra ilay tovolahy 16 taona maty voatifitra ny polisy ilay lahika mpanohitra malaza Ibrahim Sharif. Manampy izany lisitra izany ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanao gazety, mpaka sary, mpitsabo, mpanao fanatanjahantena malaza nogadraina ary olom-pirenena an'arivony ihany koa no naiditra am-ponja efa feno hipoka.
Tompondaka amin'ny lafiny ratsy amin'ny fanamelohana mpanohitra ny fitondrana Bahrainita.
Mahagaga ve raha enjehana amin'ny fiampangana mifandraika amin'ny fampihorohoroana tamin'ny fiverenany avy any Iran ny olo-malaza ao Al Wefaq? Tahaka an'i Arabia Saodita, Iraka sy Syria, ahitana toerana masina Islamika tsidihan'ireo Bahrainita Shiita an'aliny isan-taona ihany koa ao Iran. Ahitana oniversite Islamika malaza ihany koa ao. Raha tokony hampihena ny fangejany ny fahalalahana ny governemanta Bahrainita, dia nanambara vao haingana fa “handamina” ny fivezivezena ao amin'ireo faritra misy ady, indrindra amin'ny fitsipika be dia be amin'ny fivezivezen'ny olona latsaky ny 18 taona.
#Bahrain will regulate travel of it citizens to conflict zones & those under 18-years old – Interior Minister pic.twitter.com/MdvyhoSFdA
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) August 24, 2015
Hametraka fitsipika amin'ny fivezivezen'ny olom-pireneny ao amin'ny faritra misy ady sy ho an'ireo olona latsaky ny 18 taona i Barhain – Minisitry ny Atitany
Tsy midika fanenjanana ny fahalalahana ara-pivavahana sy ny fahalalahana mifindrafindra toerana fotsiny izany, saingy azo jerena ho toy ny fikasana hanokanamonina ny Bahrainita Shiita amin'ireo namany ara-potokevitra ao amin'ny faritra sy manao ho heloka bevava izay fikasana handrava ity sakana vaovao ity.
Omen'ny mpandala ny zon'olombelona tsiny i Etazonia noho izy mangina loatra amin'i Bahrain “mpiara-dia ara-stratejika” hatry ny ela, sady mampiantrano ny andia-tafika an'habakabaka US fahadimy. Tamin'ny volana Jona i Etazonia nanaisotra ny fandràrany amin'ny fanampiana ara-miaramila an'i Bahrain lazaina fa efa misy “fanavaozana mana-danja”, eny fa na dia miha-lalina aza ny olana ara-politika. Manoloana ireo mpitarika “azo leferina” ao amin'ny fanoherana izay teo amin'ny latabatra fifanakalozan-kevitra taloha fa nampidirina am-ponja tsikelikely ankehitriny, dia toa tsy hita mangirana eny amin'ny faravodilanitra ny fifanarahana ara-politika .